Warshadda kale ee Wax Soo Saarka Dhagaxa - Shiinaha Soosaarayaasha kale ee Wershada dhagaxa, Shirkadaha
Sharaxaadda Waxsoosaarka: HF 603 Waxyaabaha: Granite dabiiciga ah Cabbirka: DIA: 21CM Xirmooyin: Sanduuqa hadiyadda ama sanduuqa bunni Abuurista quraacyo macaan leh oo leh kaniisadda Swissmar Gruyere sagaal gabal fondue set. Waxaa lagu sameeyay dhoobada saxda ah ee Switzerland, Dheriga dhoobada-dhoobada dab-damiska ayaa ah habka aad runtii guriga ugu soo qaadan karto xoogaa Switzerland ah. Kaqeyb gal dhaqan aan waligiis gaboobin! Dheriga dhoobada ayaa badbaado u leh isticmaalka jikada, foornada, microwave-ka iyo waxyaabaha lagu kariyo waxyaabaha dabiiciga ah ee dabka lagu kariyo. Qaybtan waxaa ku jira fondue ...
Sharaxaadda Alaabta: Waxyaabaha JT: Cabbirka birta xaddiga: 18 * 0.9 Xirmidda: sanduuqa hadiyadda ama sanduuqa bunni 1.Wax u isticmaalista skillet, foornada, ama foorno dibedda ku yaal 2.Handy si looga tirtiro curl ama hilib doofaar, adoo riixaya aan loo baahnayn dufanka ku jira gorgorrada ama bolse, iyo kuleylka ku haay ismariskaaga la dubay.
Sharaxaadda Alaabta: JT Reetangular Hilibka Saxaafadda Hilibka: Cabbirka birta xaddiga: 21 * 11 * 1.2 Baakadaha: sanduuqa hadiyadda ama sanduuqa bunni 1.Gursiga loo isticmaalo qalfoofka, foornada, ama foorno dibedda ah 2.Handy si looga tirtiro curl hilib doofaar ama ham, adoo riixaya dufanka aan loo baahnayn ee guntimaha ka samaysan ee galleyda ama bolse, iyo kuleylka ku haynta kuleylkaaga la dubay 3.Hammered base base 4.Handle wuxuu leeyahay naqshad karis qafiif ah 5.Seasoned oo diyaar u ah inuu isticmaalo